မောငျနှမအခငျြးခငျြး ရနျဖွဈတာကို ရပျတနျ့စဖေို့ ကူညီပေးမယျ့ မိဘတှအေတှကျ သိကောငျးစရာ (၉)ခု - Lifestyle Myanmar
မောငျနှမအခငျြးခငျြး ရနျဖွဈတယျဆိုတာ ဖွဈနကြေ သဘာဝတဈခုသာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ ပဋိပက်ခတှကေို ဖွရှေငျးနိုငျစှမျးကလညျး သူတို့အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။ မိဘတှအေနနေဲ့ ကွားထဲက ဝငျဖနျြဖွပေေးလို့ရပမေယျ့ ကလေးတှေ ကိုယျတိုငျ ပွဿနာတှကေို ဖွရှေငျးတတျအောငျ သငျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ မိဘတှအေတှကျ ကလေးတှေ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ရနျဖွဈခွငျးမှ ရပျတနျ့သှားအောငျ ပွုလုပျပေးဖို့ နညျးလမျးလေးတှေ ရှိပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ညီအဈကို မောငျနှမတှအေကွား ရနျဖွဈတာကို အဆုံးသတျပေးဖို့ မိဘတှေ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ အကွံပေးခကျြလေးတှေ ရှိတာကွောငျ့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
၁။ သူတို့အကွိုကျဆုံး ဇာတျကောငျကို နမူနာထားဖို့ သတိပေးပါ
ကလေးတှမှော ကာတှနျးနှငျ့ စာအုပျ တှထေဲက အကွိုကျဆုံး ဇာတျကောငျဆိုတာ ရှိကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ သူတို့ရဲ့ အဈကိုတှေ အဈမတှနေဲ့ ရနျဖွဈတဲ့အခါမှာ သတိပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ သမီးတှေ ရနျဖွဈနရေငျ စငျဒရဲလားက သူ့ရဲ့ ဖအတေူ မအကှေဲညီမကို ပုံပွငျရဲ့ အဆုံးမှာ ဘယျလို ခှငျ့လှတျပေးတယျဆိုတာ ဒါမှမဟုတျ ဟယျရီပျေါတာက သူ့ရဲ့ ဝမျးကှဲ Dudley နဲ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဘယျလို ရယူသလဲဆိုတာ သူတို့ကို သတိပေးပါ။ ကလေးတှကေို မိသားစုရဲ့ အရေးပါမှုနှငျ့ ခှငျ့လှတျမှု၊ ပဋိပက်ခတှကေို ဖွရှေငျးခွငျးနှငျ့ ပတျသတျသော ပုံပွငျတှနေဲ့ ထိတှပေ့ေးပါ။
၂။ စုဘူးတဈလုံး(သို့) အလုပျအိုးတဈလုံး ဖနျတီးပါ
မောငျနှမအခငျြးခငျြး တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ရနျဖွဈနရေငျ စုဘူးထဲမှာ ဒဏျငှထေညျ့ဖို့ အလအေ့ကငျြ့လုပျပေးပါ။ ကလေးက ပေးစရာ ပိုကျဆံမရှိဘူးဆိုရငျ နောကျတဈနညျးက သူတို့ လုပျနိုငျမယျ့ အိမျအလုပျလေးတှကေို မဲလိပျလေးတှပွေုလုပျပေးပွီး ဘူးတဈခုထဲ ထညျ့ထားပါ။ ရနျဖွဈတာနဲ့ မဲနှိုကျခိုငျးပါ။ ဒီနညျးလမျးလေးတှကေ ရနျခဏခဏဖွဈတဲ့ အလအေ့ထကို ဖကျြသိမျးပေးနိုငျပါတယျ။
၃။ ကလေးတှကေို စာတဈစောငျ ရေးခိုငျးပါ
ကလေးတှေ ရနျဖွဈပွီးသှားရငျ ထိုငျခိုငျးပွီး သူတို့ခံစားခကျြတှကေို ခရြေးဖို့ ပွောပါ။ ကလေးတှဟော သူတို့ခံစားခကျြတှကေို သိလာပွီး ဘာမှမဟုတျတဲ့ ပွဿနာလေးတှနေဲ့ ရနျဖွဈမိနတေယျဆိုတာ နားလညျသဘောပေါကျလာပါလိမျ့မယျ။ ကလေးက ဒီလိုစာရေးရတာ မကွိုကျဘူးဆိုရငျ ရနျမဖွဈအောငျ သူ့ဘာသာ ရှောငျလာနိုငျတာကွောငျ့ ပိုတောငျကောငျးပါသေးတယျ။
၄။ တဈယောကျအပျေါ တဈယောကျ အခြိနျပေးပါ
ကလေးတဈယောကျခငျြးစီနှငျ့အတူ သီးသနျ့ အရာလေးတှေ ပွုလုပျခွငျးက အခြို့သော အကြိုးကြေးဇူးတှေ ရရှိပါလိမျ့မယျ။ ကလေးတှဟော တနျးတူဂရုစိုကျမှု ရနသေမြှ ကာလပတျလုံး သူတို့ဟာ တနျဖိုးရှိတဲ့ ကလေးတှဖွေဈကွောငျး သှနျသငျပေးသလို ဖွဈစပေါတယျ။ မိဘတှနေဲ့ အတူတူ ပူးပေါငျးယုံသာမဟုတျဘဲ ရနျဖွဈဖို့ကို သတိပွုမိတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ကလေးတဈယောကျစီကို မြှမြှတတ ဂရုစိုကျပေးပါ။
၅။ သားသားမီးမီးတှကေို တဈယာကျနဲ့ တဈယောကျ အခငျြးခငျြး ရပျတညျပေးဖို့ သငျပေးပါ
မိဘတှကေ သားသမီးတဈယောကျကို ကာကှယျပေးတဲ့အခါ တခွားတဈယောကျက သားသမီးခငျြးအတူတူ ဘကျလိုကျတယျလို့ ခံစားရစပေါတယျ။ ၎င်းငျးက တငျးမာမှုကို ပိုမိုဆိုးရှားစပေါတယျ။ အဲ့ဒီအစား ပွဿနာတှကေို သူတို့ဘာသာသူတို့ ဖွရှေငျးတတျဖို့ ၊ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ သူတို့ရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ဖျောပွဖို့ ကလေးတှကေို လကေ့ငျြ့ပေးပါ။
၆။ ပွဿနာတဈခုကို အတူတူဖွရှေငျးခိုငျးပါ
ကလေးတှေ ရနျဖွဈရငျ ပဟဠေိတဈခုအနနေဲ့ နှဈယောကျပေါငျးပွီးလုပျဖို့ တဈခုခု ဖနျတီးပေးပါ။ သူတို့ဖွရှေငျးတဲ့အခါ သူတို့အတှကျ ခကျခဲတဲ့ ပဟဠေိတဈခု ပေးပါ။ ဒါက သူတို့ကို အခငျြးခငျြးကူညီတတျစဖေို့နဲ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မှီခိုအားထားစဖေို့ သငျပေးပါတယျ။
၇။ ရနျဖွဈရငျ အပွငျမှာ ထုတျထားပါ
အရာရာတိုငျးမှာ အခြိနျနဲ့ နရောဆိုတာ ရှိတာကွောငျ့ အိမျထဲမှာ ရနျဖွဈခွငျး၊ အျောဟဈခွငျးလုပျရမယျ့ နရောမဟုတျဘူးဆိုတာ ကလေးတှကေို အသိပေးပါ။ ဒီနညျးလမျးက ကလေးတှကေို ဒေါသတခြို့ ပွစေဖေို့ အခှငျ့အရေးတဈခု လညျးပေးပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာ ရနျဖွဈတဲ့ အလအေ့ထ ပြောကျသှားပါလိမျ့မယျ။
၈။ အားလပျရကျတှေ စီစဉျပါ
ကလေးတှဟော တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျနဖေို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒီအတှကျ ဘာအသေးစိတျ စီစဉျမှုမှ မလိုပါဘူး။ တနင်ျဂနှေ ပိတျရကျမှာ ကလေးတှကေို ချေါပွီး တိရိစ်ဆာနျရုံ သှားပါ။
၉။ သူတို့ကောငျးတာလုပျရငျ ခြီးကြူးပေးပါ
ကလေးတှေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လုပျပွနတေဲ့အခါမှာ အသိအမှတျမပွုပါနဲ့။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အပွနျအလှနျပူးပေါငျးနတောကို တှတေဲ့အခါ သူတို့ကို မှတျခကျြပေးပွီး ဆုခပြါ။ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ အားပေးမှုက သူတို့အတှကျ အရေးကွီးပါတယျနျော။
မောငျနှမအခငျြးခငျြး ရနျဖွဈတာက ကောငျးသလား?
ကလေးအရှယျမှာ မောငျနှမအခငျြးခငျြး ရနျဖွဈတာက ကောငျးတဲ့အရာတဈခုလား။ Parent’s Guide တှကေို ရေးသားသူ Marian Edelman Borden ကတော့ ရနျဖွဈခွငျးက ကလေးတှအေတှကျ ကနျြးမာသနျစှမျးစပွေီး ရရှေညျမှာ ကလေးတှကေို အကူအညီဖွဈစတေယျလို့ ထငျမွငျကွောငျး ဖျောပွထားပါတယျ။ နောကျဆုံးအနနေဲ့ ကလေးတှကေို ကိုယျထိလကျရောကျ ရနျဖွဈမယျ့အစား စကားလုံးတှသေုံးပွီး ပွဿနာကို ဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲ၊ ကိုယျ့အမွငျကို ဘယျလိုဖျောပွမလဲဆိုတဲ့ သငျခနျးစာမြားကို သငျပေးပွီး သူတို့မှာ မှေးခငျြးမောငျနှမရှိခွငျးက ဘယျလောကျ ကံကောငျးကွောငျး တနျဖိုးထားတတျအောငျ သငျပေးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
မောင်နှမအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်တာကို ရပ်တန့်စေဖို့ ကူညီပေးမယ့် မိဘတွေအတွက် သိကောင်းစရာ (၉)ခု
မောင်နှမအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နေကျ သဘာဝတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကလည်း သူတို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကြားထဲက ဝင်ဖျန်ဖြေပေးလို့ရပေမယ့် ကလေးတွေ ကိုယ်တိုင် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းတတ်အောင် သင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ မိဘတွေအတွက် ကလေးတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ခြင်းမှ ရပ်တန့်သွားအောင် ပြုလုပ်ပေးဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေအကြား ရန်ဖြစ်တာကို အဆုံးသတ်ပေးဖို့ မိဘတွေ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အကြံပေးချက်လေးတွေ ရှိတာကြောင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ သူတို့အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကောင်ကို နမူနာထားဖို့ သတိပေးပါ
ကလေးတွေမှာ ကာတွန်းနှင့် စာအုပ် တွေထဲက အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကောင်ဆိုတာ ရှိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတို့ရဲ့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ သတိပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးတွေ ရန်ဖြစ်နေရင် စင်ဒရဲလားက သူ့ရဲ့ ဖအေတူ မအေကွဲညီမကို ပုံပြင်ရဲ့ အဆုံးမှာ ဘယ်လို ခွင့်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတာ ဒါမှမဟုတ် ဟယ်ရီပေါ်တာက သူ့ရဲ့ ဝမ်းကွဲ Dudley နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဘယ်လို ရယူသလဲဆိုတာ သူတို့ကို သတိပေးပါ။ ကလေးတွေကို မိသားစုရဲ့ အရေးပါမှုနှင့် ခွင့်လွတ်မှု၊ ပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သော ပုံပြင်တွေနဲ့ ထိတွေ့ပေးပါ။
၂။ စုဘူးတစ်လုံး(သို့) အလုပ်အိုးတစ်လုံး ဖန်တီးပါ
မောင်နှမအချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်နေရင် စုဘူးထဲမှာ ဒဏ်ငွေထည့်ဖို့ အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးပါ။ ကလေးက ပေးစရာ ပိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုရင် နောက်တစ်နည်းက သူတို့ လုပ်နိုင်မယ့် အိမ်အလုပ်လေးတွေကို မဲလိပ်လေးတွေပြုလုပ်ပေးပြီး ဘူးတစ်ခုထဲ ထည့်ထားပါ။ ရန်ဖြစ်တာနဲ့ မဲနှိုက်ခိုင်းပါ။ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေက ရန်ခဏခဏဖြစ်တဲ့ အလေ့အထကို ဖျက်သိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
၃။ ကလေးတွေကို စာတစ်စောင် ရေးခိုင်းပါ
ကလေးတွေ ရန်ဖြစ်ပြီးသွားရင် ထိုင်ခိုင်းပြီး သူတို့ခံစားချက်တွေကို ချရေးဖို့ ပြောပါ။ ကလေးတွေဟာ သူတို့ခံစားချက်တွေကို သိလာပြီး ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ပြဿနာလေးတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်မိနေတယ်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကလေးက ဒီလိုစာရေးရတာ မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ရန်မဖြစ်အောင် သူ့ဘာသာ ရှောင်လာနိုင်တာကြောင့် ပိုတောင်ကောင်းပါသေးတယ်။
၄။ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် အချိန်ပေးပါ
ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီနှင့်အတူ သီးသန့် အရာလေးတွေ ပြုလုပ်ခြင်းက အချို့သော အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေဟာ တန်းတူဂရုစိုက်မှု ရနေသမျှ ကာလပတ်လုံး သူတို့ဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကလေးတွေဖြစ်ကြောင်း သွန်သင်ပေးသလို ဖြစ်စေပါတယ်။ မိဘတွေနဲ့ အတူတူ ပူးပေါင်းယုံသာမဟုတ်ဘဲ ရန်ဖြစ်ဖို့ကို သတိပြုမိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်စီကို မျှမျှတတ ဂရုစိုက်ပေးပါ။
၅။ သားသားမီးမီးတွေကို တစ်ယာက်နဲ့ တစ်ယောက် အချင်းချင်း ရပ်တည်ပေးဖို့ သင်ပေးပါ
မိဘတွေက သားသမီးတစ်ယောက်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အခါ တခြားတစ်ယောက်က သားသမီးချင်းအတူတူ ဘက်လိုက်တယ်လို့ ခံစားရစေပါတယ်။ ၎င်းက တင်းမာမှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။ အဲ့ဒီအစား ပြဿနာတွေကို သူတို့ဘာသာသူတို့ ဖြေရှင်းတတ်ဖို့ ၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖော်ပြဖို့ ကလေးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးပါ။
၆။ ပြဿနာတစ်ခုကို အတူတူဖြေရှင်းခိုင်းပါ
ကလေးတွေ ရန်ဖြစ်ရင် ပဟေဠိတစ်ခုအနေနဲ့ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလုပ်ဖို့ တစ်ခုခု ဖန်တီးပေးပါ။ သူတို့ဖြေရှင်းတဲ့အခါ သူတို့အတွက် ခက်ခဲတဲ့ ပဟေဠိတစ်ခု ပေးပါ။ ဒါက သူတို့ကို အချင်းချင်းကူညီတတ်စေဖို့နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မှီခိုအားထားစေဖို့ သင်ပေးပါတယ်။
၇။ ရန်ဖြစ်ရင် အပြင်မှာ ထုတ်ထားပါ
အရာရာတိုင်းမှာ အချိန်နဲ့ နေရာဆိုတာ ရှိတာကြောင့် အိမ်ထဲမှာ ရန်ဖြစ်ခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်းလုပ်ရမယ့် နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကလေးတွေကို အသိပေးပါ။ ဒီနည်းလမ်းက ကလေးတွေကို ဒေါသတချို့ ပြေစေဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခု လည်းပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ရန်ဖြစ်တဲ့ အလေ့အထ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
၈။ အားလပ်ရက်တွေ စီစဉ်ပါ
ကလေးတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအတွက် ဘာအသေးစိတ် စီစဉ်မှုမှ မလိုပါဘူး။ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်မှာ ကလေးတွေကို ခေါ်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ရုံ သွားပါ။
၉။ သူတို့ကောင်းတာလုပ်ရင် ချီးကျူးပေးပါ
ကလေးတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လုပ်ပြနေတဲ့အခါမှာ အသိအမှတ်မပြုပါနဲ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းနေတာကို တွေ့တဲ့အခါ သူတို့ကို မှတ်ချက်ပေးပြီး ဆုချပါ။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အားပေးမှုက သူတို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်နော်။
မောင်နှမအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်တာက ကောင်းသလား?
ကလေးအရွယ်မှာ မောင်နှမအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်တာက ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလား။ Parent’s Guide တွေကို ရေးသားသူ Marian Edelman Borden ကတော့ ရန်ဖြစ်ခြင်းက ကလေးတွေအတွက် ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပြီး ရေရှည်မှာ ကလေးတွေကို အကူအညီဖြစ်စေတယ်လို့ ထင်မြင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကလေးတွေကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရန်ဖြစ်မယ့်အစား စကားလုံးတွေသုံးပြီး ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ၊ ကိုယ့်အမြင်ကို ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာများကို သင်ပေးပြီး သူတို့မှာ မွေးချင်းမောင်နှမရှိခြင်းက ဘယ်လောက် ကံကောင်းကြောင်း တန်ဖိုးထားတတ်အောင် သင်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။